Iinkonzo zeinshurensi Ukuthengisa kunye nokuhlawulwa ngaphakathi Philippines
IPHAWU LAMAHHALA KWI-intanethi nganye i-peso ibala.Savela kwi-inshurensi yakho. Yiba NENGXOXO ESIMAHLA ngomzuzu okanye nangaphantsi kwendlela yasimahla yasimahla Indlela eqinisekisiweyo yokufikelela kwiintlawulo ezi-6 ezilinganayo (zityibilikisiwe ngenyanga) Lungisa uthatho-nxaxheba abangama-2000 ng...
Ipapashwe ngu vigattin
umbono Iinkonzo zeinshurensi ipapashiwe 2 years ago
Khetha udidiAccommodations Spare roomsResidential homes Houses Apartments Condos Townhouses UnitsLand lots Residential Land Agricultural LandCommercial Real Estate Office spaces Industrial premisesBusiness Directory Financial Service Providers Pest Control Insurance ServicesReal Estate Agent Directory Real Estate Brokers
IPhilippines ((mamela); IPhilippines: IiPhilipinas [ˌpɪlɪˈpinɐs] okanye [fɪlɪˈpinɐs], ngokusemthethweni iRiphabhlikhi yasePhilippines (Filipino: Republika ng Pilipinas), lilizwe elikwiziqithi ezikumazantsi-mpuma aseAsia. Ikwisimo esentshona yoLwandlekazi lwePasifiki, ineziqithi ezimalunga ne-7,641 eziqikelezwe ngokubanzi phantsi kwezahlulo ezithathu zomhlaba ukusuka emantla ukuya emazantsi: iLuzon, Visayas naseMindanao. Idolophu enkulu yakwiiPhilippines yiManila kwaye esona sixeko sihlala abantu abaninzi sisiXeko saseQuezon, zombini sikummandla wedolophu enye weMetro Manila. Ukhuselwe luLwandle lwaseMzantsi China ngasentshona, ulwandle lwasePhilippines ngasempuma kunye nolwandle lweCelebes kumazantsi mpuma, iiPhilippines zabelana ngemida yaselwandle kunye neTaiwan emantla, iJapan ukuya empuma, ePalau empuma, e-Indonesia emazantsi, IMalaysia kunye neBrunei kumazantsi-ntshona, iVietnam ukuya entshona, kunye neTshayina emantla ntshona. Indawo ekuthiwa yiPhilippines kwiNdawo yoMlilo yePasifiki kwaye ikufuphi neikhweyitha yenza ukuba ilizwe lithambekele kwiinyikima zomhlaba kunye nezaqhwithi, kodwa liyayigcina ngobuninzi bendalo kunye nezinye izinto eziphilayo ezahlukeneyo zomhlaba. IPhilippines lelona lizwe lisihlanu ngobukhulu kwilizwe elinesiqithi esine-300,000 km2 (120,000 sq mi). Ukusukela ngonyaka ka-2015, yayinabemi abazizigidi ezili-100. Ukusukela ngoJanuwari ngo-2018, lilizwe lesibhozo elinabemi abaninzi eAsia nakwilizwe le-12 elinabona bantu baninzi emhlabeni. Phantse zizigidi ezili-10 iiPhilippines ezongezelelekileyo ezihlala phesheya kolwandle ukusukela ngonyaka ka-2013, ezibandakanya enye yeedasporas ezinkulu zehlabathi. Iintlanga ezahlukeneyo kunye neenkcubeko zifumaneka kuzo zonke iziqithi. Kumaxesha e-prehistoric, i-Negritos yayingabanye babemi bokuqala beziqithi. Balandelwa ngamaza alandayo abantu base-Austronesian. Ukutshintshiselana kunye neMalay, Indiya, Arab kunye ne-China zenzekile. Emva koko, amazwe ahlukeneyo okhuphiswano lwaselwandle asekwa phantsi komgaqo wedus, rajahs, sultans kunye ne-lakans. Ukufika kukaFerdinand Magellan, umhloli wamazwe wasePortugal okhokela inqanawa yaseSpain, waphawula ukuqala kolawulo lwe-Rico. Ngo-1543, umhloli wamazwe waseSpain uRuy López de Villalobos watyhola igama leziqithi iLas Islas Filipinas ehlonipha uPhilip II waseSpain. Ngo-1565, kwasekwa indawo yokuqala yase-Hispanic kwiziqithi, kwaye iiPhilippines zaba yinxalenye yoBukhosi baseSpain kangangesithuba seminyaka engama-300. Ngeli xesha, ubuKatolika baba yeyona nkolo iphambili, kwaye uManila waba sisixhobo esisentshona sorhwebo lwePasifiki. Ngo-1896 i-Philippine Revolution yaqala, emva koko yaqala ukubandakanyeka kwi-1898 ye-Spanish-American War. ISpeyin yaqinisekisa ukuba le ndawo iya eUnited States, ngelixa abavukeli bakwiiPhilippines babhengeza iRiphabhlikhi yasePhilippines yokuqala. Imfazwe eyalandelayo yasePhilippine-eAmerican yaphela i-United States yamisela ulawulo lwendawo leyo bayigcina bade bangena ekuhlaselweni nguJapan kwezi ziqithi ngexesha leMfazwe yesibini yeHlabathi. Emva kwenkululeko, iPhilippines yaba lilizwe elizimeleyo ngo-1946. Ukusukela ngoko, ilizwe elizimeleyo lalisoloko linamagqabantshintshi ngentando yenkululeko, elaliquka ukubhukuqwa kozwilakhe ngoguquko olungenabundlobongela.IPhilippines lilungu elasungula ilizwe. I-United Nations, Umbutho wezoRhwebo weHlabathi, uMbutho wamazwe asempuma-mpuma eAsia, iforum yokusebenzisana kwe-Asia nePasifiki, kunye neNgqungquthela ye-Asia. Ikwabamba nekomkhulu leBhanki yoPhuhliso yase-Asiya. IPhilippines ithathwa njengemakethi evelayo nelizwe elisandula ukuphuculwa, elinokutshintsha koqoqosho ukusuka ekubeni lusekwe kwezolimo lube lusekwe kakhulu kwinkonzo nakwimveliso.
I-inshurensi yindlela yokhuselo ekulahlekelweni yimali. Luhlobo lolawulo lomngcipheko olusetyenziswa ikakhulu ukubiyela umngcipheko welahleko enokubakho, yokungaqiniseki. Umbutho obonelela i-inshurensi yaziwa ngokuba ngumshuwalense, inkampani ye-inshurensi, okanye inkampani yeinshurensi. Umntu okanye iziko elithenga i-inshurensi laziwa njenge-insured okanye umnikazi wepolisi. Intengiselwano ye-inshurensi ibandakanya ukufumana i-inshurensi uthatha into eqinisekisiweyo neyaziwayo encinci yokulahleka kwindlela yokuhlawula kumnkampani weinshurensi xa kuthe kwenzeka ngelahleko eligutyungelweyo. Ilahleko isenokungabikho okanye ingekho semalini, kodwa kufuneka ihlawulwe ngokwemibandela yezemali, kwaye kufuneka ibandakanye into apho i-insured inenzala enganyangeki esekwe bubunini, ubunini, okanye ubudlelwane bepension. Umgcini weinshurensi ufumana ikhontrakthi, ebizwa ngokuba ngumgaqo-nkqubo weinshurensi, ochaza imigaqo neemeko apho i-insured iya kuhlawulwa ngemali. Isixa semali esityalwa yi-inshurensi i-insured kwi-insulin yokuhlawulwa kwemali ebekiweyo kumgaqo-nkqubo weinshurensi kuthiwa yiprimiyamu. Ukuba i-inshurensi iva ilahleko enokuthi igqunywe ngumgaqo-nkqubo we-inshurensi, i-inshurensi ingenisa ibango kum inshurensi ukuze ilungiswe ngummeli wamabango.
Zonke iindidiIndawo yokuhlalaAmakhaya okuhlalaIqashiso lomhlabaUkuthengisa izindlu nomhlabaIsalathiso seShishiniIsiqondisi seArhente yeZindlu